Madaxweyne Mahama ayaa guuleystay - BBC Somali - Warar
Madaxweyne Mahama ayaa guuleystay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 10 December, 2012, 02:25 GMT 05:25 SGA
Madaxweynaha talada haya ee John Mahama ayaa ku guuleystay doorashada
Guddiga doorashada dalka Ghana ayaa sheegay in Madaxweynaha hadda talada haya ee John Mahama, uu ku guulesytay wareegga koowaad ee doorashada madaxtinimada, laakiin xisbiga mucaaradka ee ugu weyn ayaa dood ka qaba natiijada.
Guddigu waxa uu sheegay in Mr Mahama uu ku guuleystay 50.7 boqolkiiba codadka, isagoo aanan u baahan in mar kale ay iskula noqdaan Nana Akufo-Addo oo helay 47.7 boqolkiiba.
Muuqaal la soo saaray telefishinka Ghana ayaa muujinaya taageerayaasha Mr Mahama oo dabaaldegaya, laakiin xisbiga Mr Akufo-Addo ee New Patriotic Party, ayaa qaaddacay oo ku eedeeyay in in wax la is daba mariyay.
Weriye BBC ka tirsan ayaa sheegaya in xaaladda magaalada caasimadda ah ee Accra ay kacsan tahay.
Afrika Weerar lagu qaaday madaxtooyada Muqdisho
US oo dooneysa Joojinta duqeynta Qaza
12 Luulyo 2014
Amniga Rio ee Brazil oo la adkeeyay 12 Luulyo 2014
Dhimashada duqeymaha Isra'iil ee Qaza oo 100 gaartay